The Time Traveler’s Wife (2009) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
အခြိနျတှနေောကျပွနျသှားလို့ရရငျ ကောငျးမှာပဲဆိုတဲ့လူတှေ…… အခြိနျတော့နောကျပွနျလှညျ့လို့ရတယျဒါပမေဲ့ ဘယျအခြိနျမှာဘယျနရောကို ရောကျသှားမယျမှနျးမသိ၊ ဝမျးနညျးစရာအဖွဈအပကျြတှရှေိလာခဲ့ရငျတောငျ ဘာမှပွငျလို့မရဘဲ အဲဒီအဖွဈအပကျြကို ထပျတလဲလဲ အခြိနျတှနေောကျပွနျလှညျ့ပွီး မွငျနရေရငျရော????အခြိနျခရီးသှားလို့ရတာကောငျးပါဦးမလား…….ဒီဇာတျကားထဲက မငျးသားရဲ့အနထေားကတော့ အဲလိုပါ။သူ့အမကေားအကျဆီးဒငျ့ဖွဈတာကိုလဲ အခါခါပွနျမွငျနရေပမေယျ့ ဘာမှလုပျပေးလို့မရဘဲ ကွညျ့နရေတဲ့ အမခေဈြသားတဈယောကျရဲ့ခံစားခကျြကို အမွဲခံစားနခေဲ့ရတာပါ။
သူ့အတှကျတော့ အခြိနျခရီးသှားတယျဆိုတာ ကြိနျစာတဈခုလိုပါပဲ။နောကျပွီးဘာမှနျးမသိတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျမှနျးမသိတဲ့နရောကို အလိုအလြောကျပြောကျသှားတတျတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျကို ငယျစဉျကလေးဘဝကတညျးက ခဈြလာခဲ့ပွီး လကျထပျဖို့ဆုံးဖွတျခဲ့တဲ့မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ဘဝကရော ဘယျလောကျထိသာယာခမျြးမွနေို့ငျမှာလဲ။ဒါပမေဲ့ ခဈြတဲ့စိတျတဈခုနဲ့ပဲအရာရာကို ကြျောဖွတျရဲခဲ့တဲ့ မိနျးကလေးအတှကျ သူ့ယောကျြားရဲ့ကြိနျစာက အမွဲတမျးတော့ကြိနျစာမဖွဈခဲ့ပါဘူး။သာမာနျလူတှနေဲ့မတူပမေဲ့လဲ ယောကျြားတဈယောကျအနနေဲ့ ကိုယျ့ဇနီးမယားပျေါ တာဝနျကခြေငျြစိတျနဲ့ ကွိုးစားပေးခဲ့ပုံတှကေို တှမွေ့ငျရမယျ့ကားလေးဖွဈပါတယျ။ဘယျလိုပဲကွိုးစားပမေဲ့ အိမျထောငျတဈခုဖွဈလာတဲ့အခါ သာမာနျမိနျးမတဈယောကျရသငျ့တဲ့ အခှငျ့အရေးတှကေို ရခငျြမိတဲ့ အခြိနျခရီးသှားတဈယောကျရဲ့ မိနျးမဘဝက ဘယျလောကျထိကွကှေဲစရာကောငျးလဲဆိုတာကို ဒီဇာတျကားလေးက မိမိရရရိုကျပွထားတာဖွဈလို့ လုံးဝလကျမလှတျသငျ့တဲ့ ဒရမျမာဇာတျကားကောငျးလေးတဈကားပါ။
အချိန်တွေနောက်ပြန်သွားလို့ရရင် ကောင်းမှာပဲဆိုတဲ့လူတွေ…… အချိန်တော့နောက်ပြန်လှည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ဘယ်အချိန်မှာဘယ်နေရာကို ရောက်သွားမယ်မှန်းမသိ၊ ဝမ်းနည်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေရှိလာခဲ့ရင်တောင် ဘာမှပြင်လို့မရဘဲ အဲဒီအဖြစ်အပျက်ကို ထပ်တလဲလဲ အချိန်တွေနောက်ပြန်လှည့်ပြီး မြင်နေရရင်ရော????အချိန်ခရီးသွားလို့ရတာကောင်းပါဦးမလား…….ဒီဇာတ်ကားထဲက မင်းသားရဲ့အနေထားကတော့ အဲလိုပါ။သူ့အမေကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်တာကိုလဲ အခါခါပြန်မြင်နေရပေမယ့် ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘဲ ကြည့်နေရတဲ့ အမေချစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကို အမြဲခံစားနေခဲ့ရတာပါ။
သူ့အတွက်တော့ အချိန်ခရီးသွားတယ်ဆိုတာ ကျိန်စာတစ်ခုလိုပါပဲ။နောက်ပြီးဘာမှန်းမသိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်မှန်းမသိတဲ့နေရာကို အလိုအလျောက်ပျောက်သွားတတ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက ချစ်လာခဲ့ပြီး လက်ထပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကရော ဘယ်လောက်ထိသာယာချမ်းမြေ့နိုင်မှာလဲ။ဒါပေမဲ့ ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအရာရာကို ကျော်ဖြတ်ရဲခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးအတွက် သူ့ယောက်ျားရဲ့ကျိန်စာက အမြဲတမ်းတော့ကျိန်စာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။သာမာန်လူတွေနဲ့မတူပေမဲ့လဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်ဇနီးမယားပေါ် တာဝန်ကျေချင်စိတ်နဲ့ ကြိုးစားပေးခဲ့ပုံတွေကို တွေ့မြင်ရမယ့်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုပဲကြိုးစားပေမဲ့ အိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အခါ သာမာန်မိန်းမတစ်ယောက်ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ရချင်မိတဲ့ အချိန်ခရီးသွားတစ်ယောက်ရဲ့ မိန်းမဘဝက ဘယ်လောက်ထိကြေကွဲစရာကောင်းလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားလေးက မိမိရရရိုက်ပြထားတာဖြစ်လို့ လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်တဲ့ ဒရမ်မာဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။
Alex Ferris Alison MacLeod Arliss Howard Bart Bedford Brian Bisson Brooklynn Proulx Carly Street Craig Snoyer Dan Duran David Talbot Donald Carrier Duane Murray Eric Bana Esther Jun Fiona Reid Hailey McCann James Lafazanos Jan Caruana Jean Yoon Jon Bruno Katherine Trowell Kenner Ames Maggie Castle Mario Tufino Michelle Nolden Paul Francis Philip Craig Rachel McAdams Romyen Tangsubutra Ron Livingston Scott Menville Shawn Storer Stephen Tobolowsky Tatum McCann
Option 1 yuudrive.me 509 MB SD (480p)
Option2megaup.net 509 MB SD (480p)
Option3Vip Server 509 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 509 MB SD (480p)
Option5Vip Server 1.2 GB HD (1080p)
Option9megaup.net3GB FHD (1080p) DTS 5.1